सबै उम्मेदवारका आकर्षण टीका | RajdhaniKhabar
सबै उम्मेदवारका आकर्षण टीका
नवलपरासीको मझौनी गाउँमा प्रचारप्रसार कार्यक्रम लिएर जुनसुकै दलका उम्मेदवार आए पनि कलाकार टीका पहाडी नआएसम्म उनीहरू चुनावी सभा सुरु नै गर्दैनन् । मझौनी चोकमा पुग्नेबित्तिकै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पहाडीलाई बोलाउन उनको घरतर्फ दौड्ने गर्छन् । पहाडी पनि निसंकोच उम्मेदवारको चुनावी सभामा गएर भाषण गर्न पछि पर्दैनन् । कलाकार भएकाले पहाडी आएर भाषण गरे भोट तान्न सकिने मनशायले उम्मेदवारले पहाडीलाई नै खोज्ने गरेका छन् ।
बर्दघाट नगरपालिका-१३ को मझौनी चोकमा वाम गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभामा पुगेर पहाडीले भाषण गरे । सभा सुरु हुनुपूर्व गठबन्धनका प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ का सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले पहाडीको सोधीखोजी गर्दै लिन पठाए । कार्यक्रमस्थलभन्दा आधा किलोमिटर पर माछापोखरीमा माछालाई दाना खुवाउँदै गरेका पहाडीले चुनावी सभामा आएर भने, ‘हाम्रो क्षेत्रबाट उठ्ने सबै उम्मेदवार राम्रा छन् ।
उनीहरू हाम्रा हुन् । त्यसैले गाउँको विकाससँगै रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नेतालाई गाउँलेले भोट हाल्छन् ।’ लामो समयदेखि कलाकारितामा क्रियाशील पहाडीको पुख्र्यौली घर मझौनी हो । उनले विगत १५ वर्षदेखि व्यावसायिक माछापालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
चुनावी भाषण सकेर निस्केका पहाडीले भने, ‘सबैजसो उम्मेदवारले मझौनी गाउँमा चुनावी सभा राख्ने गरेका छन् । मलाई सबैले पहाडी दाइलाई बोलाउनुस् भन्दै लिन पठाउँछन् । सबैजसो उम्मेदवारले हामीसँग हिँडेर प्रचार गर्नु पर्‍यो भन्छन् । तर म कुनै पार्टीमा आबद्ध छैन । भाषण गर्न पर्‍यो दाइ भन्छन् । मैले पनि गाउँका समस्या राखिदिने गरेको छु ।’
सोमबार सोही निर्वाचन क्षेत्रका कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य देवकरण जयसवाल र प्रदेशसभा सदस्य विक्रम खनालको पनि चुनावी सभा थियो । त्यहाँ पनि उनलाई बोलाउन पठाइयो । ‘मैले महिलालाई आत्मनिर्भर गराउन स्वरोजगारका कृषि कार्यक्रम ल्याउन माग गरेँ । बाटोघाटोका लागि रकम निकासा गरेर मात्र विकास हुँदैन ।
यहाँका बेरोजगार युवालाई कृषि कार्यक्रम ल्याउन र रोजगार बनाउन लाग्नुपर्छ । महिलालाई उद्यमशील बनाउन सीपमूलक कार्यक्रम र कृषि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर उम्मेदवारसँग माग गरेको छु’, उनले भने । तराई क्षेत्र कृषिका लागि उर्वर भूमि हो । त्यसैले जसले कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छ उसैले गाउँबाट भोट पाउँछ भनेर भन्ने गरेको छु’, उनले सुनाए ।
पहाडीले आफ्नो १० बिघा क्षेत्रफलमा माछापोखरी बनाएर व्यावसायिक माछा पाल्दै आएका छन् । माछा व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको उनले सुनाए । कृषिलाई प्रमुख पेसा बनाउँदै आएका पहाडीले कलाकारितालाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको सुनाए ।
‘अहिले पनि फिल्ममा अभिनय गरिरहेको छु । फिल्मका लागि फोन आएपछि आफ्नो भूमिकाबारे सोधपुछ गरेर चित्त बुझे ओके भन्दिने गरेको छु । त्यसैले आफूले मञ्जुर गरेको फिल्मबाट अफर आउनेबित्तिकै कृषिबाट फुर्सद निकालेर अभिनय गर्न जाने गरेको छु’, ६८ वर्षीय पहाडीले तन्नेरी जोश निकाल्दै भने, ‘म कोभन्दा कम छु र भाइ ? त्यसैले शरीरले थेगिन्जेल कलाकारितालाई पनि निरन्तरता दिनेछु ।’
बर्दघाट नगरपालिका-१३ को मझौनी चोकमा आयोजना गरिएको चुनावी कार्यक्रमपश्चात् प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ का वाम गठबन्धन सदस्य उम्मेदवार हृदयेश त्रिपाठीसँग तस्बिर खिचाउँदै कलाकार टीका पहाडी ।